ရေခဲသုပ် – Thet Nandar
Posted on January 3, 2012 May 14, 2018 by Thet Nandar
” ဟင်း … စားလိုက်ရရင်ဖြင့် ”
” Angel : အင် … အနီရောင် အချိုရည်လည်း မဆမ်းထားဘူး။ “
” Good … ကောင်းမှ ကောင်း “
Angel … ရေခဲသေတ္တာထဲက နို့ဆီသွားယူနေစဉ် ~~~
” မမ Angel လာပါပြီ …. နို့ဆီကို ဇွန်းနဲ့ ခပ်ပီး ယူလာနေပါပြီ။ ”
ရေခဲသုပ် တစ်ပွဲ = ၃၀၀ ကျပ်။ ရွှေမြန်မာမှာ အခုဆို နေ့ခင်း နေ့လည် အရမ်းပဲ ပူပါတယ်။
Categories: Myanmar - My Children, Myanmar Traditional Food
2 thoughts on “ရေခဲသုပ်”
ရေခဲသုပ်စားချင်တဲ့ ခညေး :) says:
နွေနေ့လည်ခင်းမှာ ရေခဲသုပ်လေး စားလိုက်ရ…
ရေခဲသုပ်စားချင်တဲ့ ခညေး ….
နွေရာသီဆို ရေခဲသုပ်စားရင် တပွဲနဲ့ မလောက်ဘူး။